Servo Motor Magnet emepụta na ndị na - eweta ya | Horizon
Igwe ndọdụ nke servo ma ọ bụ magneti Neodymium maka igwe ọkụ nwere nke ya pụrụ iche na ogo dị elu iji wee nwee ike ịmatakwu àgwà dị oke mkpa maka igwe eji arụ ọrụ. Mkpụrụ igwe na-ezo aka na igwe eletriki nke na-achịkwa ọrụ nke ihe eji arụ ọrụ na usoro ọrụ. Ọ bụ ihe anọ-ọsọ ọsọ mgbanwe ngwaọrụ maka inyeaka moto. Igwe ọrụ ahụ nwere ike ime ka njikwa na-achịkwa ọsọ ọsọ na ọnọdụ ziri ezi, ma nwee ike ịgbanwe mgbaàmà voltage na torque na ọsọ iji chụga ihe njikwa. A na-achịkwa ọsọ rotor nke servo moto site na akara ngosi ntinye ma nwee ike imeghachi omume ngwa ngwa.
Ebe ọ bụ na ngalaba Indramat nke Rexroth kwalitere MAC na-adịgide adịgide magnet AC servo moto na draịva usoro na Hannover ahia ngosi na 1978, nke a na-egosi na ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ AC servo abanyela na arụmọrụ bara uru. Ka ọ na-erule etiti na ngwụsị 1980, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere usoro zuru ezu nke ngwaahịa. Dum ahịa ahịa na-atụgharị na sistemụ AC. Ọtụtụ n'ime sistemụ eletriki arụmọrụ dị elu na-eji magnet synchronous AC servo motor, na onye ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị usoro sistemu dijitalụ zuru oke na ọnọdụ ngwa ngwa na nke ziri ezi. E nwere ụdị ndị nrụpụta dịka Siemens, Kollmorgen, Panasonic, Yaskawa, wdg.
N'ihi ọrụ ziri ezi nke ụgbọ mmiri servo ahụ, ọ nwere iwu siri ike gbasara ịrụ ọrụ ziri ezi na arụmọrụ dị elu, nke kachasị na-adabere na mma nke Neodymium magnets maka servo motors. Ruru ka a dịgasị iche iche nke elu magnetik Njirimara, Neodymium ndọta-eme ka ndị servo Motors na o kwere omume na ala ibu na nta size tụnyere omenala magnetik ihe, dị ka Ferrite, Alnico ma ọ bụ SmCo ndọta.
Maka igwe magnet igwe, ugbu a Horizon Magnetics na-eweputa usoro nke akara ngwụcha nke Neodymium magnets, dị ka H, ​​SH, UH, EH na AH na ịgbaso njirimara atọ:
1.High intersic coercivity Hcj: elu ka> 35kOe (> 2785 kA / m) nke na-eme ka magnet demagnetizing na-eguzogide na mgbe ahụ servo moto na-arụ ọrụ nkwụsi ike
2.Low reversible okpomọkụ ọnụọgụ: ala ka α (Br) <-0.1% / ºC na β (Hcj) <-0.5% / whichC nke na-eme ka magnet okpomọkụ kwụsie ike na ana achi achi servo Motors na-arụ ọrụ na elu kwụsie ike
3.Low arọ ọnwụ: ala 2 ~ 5mg / cm2 na HAST ule ọnọdụ: 130ºC, 95% RH, 2.7 igwe ndọrọ ego, 20 ụbọchị nke enwekwu nju corrosion eguzogide ịgbatị ndụ oge nke servo Motors
Nke gara aga: Igwe Ọdụdọ Elevator
Osote: Yi Magnetic Push Pin
Igwe Ọdụdọ Elevator
Stepper Motor Igwe Ọdụdọ
Linear Motor Igwe Ọdụdọ